I-Internet Ministries - Iicawa ZikaKristu ... Bani aba bantu?
Iicawa zaKrestu ... Bani aba bantu?
Mhlawumbi uye wakuva ngamabandla kaKristu. Kwaye mhlawumbi uye wabuza, "Bani na aba bantu? Yintoni-ukuba nayiphi na into - iyahlukanisa nakwamanye amabandla ehlabathini?
"Yintoni imvelaphi yabo?"
"Nguwuphi umyalezo wabo?"
"Balawulwa njani na?"
"Bakholelwa ntoni ngeBhayibhile?
Ehlabathini lonke kukho amabandla e-20,000 amabandla kaKristu kunye ne-21 / 2 kwi-3 yezigidi zabantu. Kukho amabandla amancinci, anamalungu ambalwa nje - kunye namakhulu amakhulu akhiwa ngamalungu angamawaka amaninzi.
Amandla amaninzi kwiinkonzo zikaKristu asezantsi eUnited States apho, ngokomzekelo, kukho amalungu e-40,000 kwamanye amabandla e-135 eNashville, eTennessee. Okanye, eDallas, eTexas, apho kukho amalungu angama-36,000 kumabandla e-69. Kwimihlaba efana neTennessee, eTexas, e-Oklahoma, eAlabama, eKentucky-kunye nabanye - kukho ibandla likaKristu malunga neseli dolophu, kungakhathaliseki ukuba likhulu okanye lincinci.
Nangona inani lamabandla namalungu alininzi kakhulu kwezinye iindawo, kukho iicawa zikaKristu kuwo onke amazwe e-United States nakwamanye amazwe e-109.
Abantu boMoya wokubuyisela
Amalungu amabandla kaKristu ngabantu bomoya wokubuyiselwa - bafuna ukubuyisela ngexesha lethu lecawa yokuqala yaseTestamente eNtsha.
UDkt. Hans Kung, isazi senkolo esaziwayo saseYurophu, washicilela incwadi kwiminyaka embalwa edlulileyo enegunya elibizwa ngeCawa. UDkt Kung wakhala ngento yokuba ibandla elimiselweyo lilahlekelwe yindlela yalo; uye wathwala ngesithethe; ayiphumelelanga ukuba yintoni uKristu ayeyiceba ukuba ibe.
Impendulo kuphela, ngokutsho kukaDkt Kung, kukubuyela kwiibhalo ukuze ubone oko ibandla lisekuqaleni kwayo, kwaye emva koko kubuya kwinkulungwane yeshumi elinesine intsingiselo yecawa yokuqala. Yiyo iicawa zikaKristu ezifuna ukwenza.
Kwinqanaba lokugqibela le-18th inkulungwane, amadoda eentlanga ezahlukeneyo, efunda ngokuzimeleyo, kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi, aqala ukubuza:
-Kungani ungabuyeli ngaphaya kweentlanga ukuya ekulula kunye nasekuncineni kwecawa yokuqala?
-Kungani ningathathi iBhayibhile yedwa kwaye niphinde niqhubeke 'ninyamekele ekufundiseni kwabapostile ...' (IZenzo 2: 42)?
-Kubani ukuba ungalimi imbewu enye (iLizwi likaThixo, uLuka 8: 11), ukuba amaKristu enkulungwane yokuqala atyalwe, kwaye abe ngamaKristu kuphela, njengabo?
Babenxusa wonke umntu ukuba akhuphe ihlelo, ukulahla iziseko zabantu, nokulandela kuphela iBhayibhile.
Bafundisa ukuba akukho nto imele ifunwe ngabantu njengento yokholo ngaphandle kokuba oko kubonakala kwizibhalo.
Baye bagxininisa ukuba ukubuyela eBhayibhileni akuthethi ukusekwa kwesinye ihlelo, kodwa kunokuba ubuyele kwicawa yokuqala.
Amalungu amabandla kaKristu anomdla ngale ndlela. NgeBhayibhile njengesikhokelo sethu kuphela sifuna ukufumanisa ukuba icawa yasekuqaleni yayinjani kwaye siyayilungisa.
Asiboni oku njengekratshi, kodwa ngokuchasene. Sisindisa ukuba asinalo ilungelo lokucela ukuthembeka kwabantu kwintlangano yabantu-kodwa kuphela ilungelo lokubiza amadoda ukuba alandele isakhiwo sikaThixo.
Ngenxa yesi sizathu, asinomdla kwizikolo ezenziwe ngabantu, kodwa nje ngomzekelo weTestamente eNtsha. Asizikhumbuli ngathi njengengqungquthela - njengamaKatolika, amaProtestanti, okanye amaYuda-kodwa nje njengamalungu ecawa awayemisele uYesu kunye nokufa kwakhe.
Kwaye, oko kwenzeka, siyigqoke igama lakhe. Igama elithi "icawa likaKristu" alisetyenzisiwe njengegama lobuqu, kodwa njengexesha elichazayo elibonisa ukuba ibandla likaKristu.
Siyaqonda ukusilela kwethu kunye nobuthathaka - kwaye le sizathu esithile sokuba sifune ukulandela ngokucokisekileyo isicwangciso esipheleleyo nesipheleleyo uThixo anesonto.
Ubunye Ngokusekelwe KwiBhayibhile
Ekubeni uThixo unikele "igunya lonke" kuKristu (uMathewu 28: 18), kwaye ekubeni ekhonza njengomkhulumeli kaThixo namhlanje (Hebhere 1: 1,2), kukho ukukholelwa kwethu ukuba nguKristu kuphela onamandla okuthetha oko ibandla sifanele sifundise.
Kwaye kuba iTestamente Entsha kuphela ibeka imiyalelo kaKristu kubafundi bakhe, yedwa yodwa kufuneka isebenze njengesiseko sayo yonke imfundiso yenkolo kunye nokusebenza. Oku kuyintloko kunye namalungu amabandla kaKristu. Sikholelwa ukuba ukufundisa iTestamente Elisha ngaphandle kokuguqulwa yindlela kuphela yokukhokelela amadoda nabesifazane ukuba babe ngamaKristu.
Sikholwa ukuba inkolo yonqulo imbi. UYesu wathandazela ubunye (uJohn 17). Kwaye kamva, umpostile uPawulos wabongoza abo bahlukane ukuba bahlangane kuKristu (1 Corinthians 1).
Sikholelwa ukuba yindlela enye yokufikelela ubunye kukubuyela kwiBhayibhile. Ukuncintisana akukwazi ukuzisa ubunye. Yaye ngokuqinisekileyo akukho mntu, okanye iqela labantu, unelungelo lokwenza imigaqo yemigaqo ekufuneka wonke umntu ahlale. Kodwa kulungile ngokuthethileyo ukuba, "Masihlangane ngokulandela iBhayibhile kuphela." Oku kulungile. Oku kukhuselekile. Oku kulungile.
Ngoko iicawa zikaKristu zincenga ubunye benkolo obusekelwe kwiBhayibhile. Sikholelwa ukuba ukubhalisela kuyo nayiphi na inkolo ngaphandle kweTestamente Entsha, ukungafuni ukuthobela umyalelo weTestamente eNtsha, okanye ukulandela nayiphi na isenzo esingasigxinwa yiTestamente Entsha ukuzongeza okanye ukususa kwiimfundiso zikaThixo. Kwaye zombini ukongeza kunye nokukhupha kugwetywa eBhayibhileni (Galati 1: 6-9; ISityhilelo 22: 18,19).
Nesi sizathu iTestamente Entsha kukuphela komgaqo wokholo kunye nesenzo esinawo kwiicawa zikaKristu.
Ngalinye iBandla elizimeleyo
Iicawa zikaKristu azikho nenye yezinto ezinobungozi bombutho wezenzo zanamhlanje. Awekho iibhodi ezilawulayo - okanye zezithili, zommandla, zesizwe okanye zamazwe ngamazwe-ayikho ikomkhulu lomhlaba kwaye akukho nhlangano eyenzelwe ngabantu.
Ibandla ngalinye lizimela (ukuzilawula) kwaye lizimeleyo kwezinye iibandla. I-tie kuphela ebophelela amabandla amaninzi kunye nokuthembeka kuKristu kunye neBhayibhile.
Azikho iindibano, iintlanganiso zonyaka, okanye iimpapasho ezisemthethweni. Amabandla asebenzisana ekusekeleni amakhaya abantwana, amakhaya asebekhulile, umsebenzi wobuvangeli, njl. Nangona kunjalo, ukuthatha inxaxheba kukuzikhethela ngokuzithandela kwiqumrhu ngalinye kwaye akukho mntu okanye imigaqo-nkqubo yemigaqo okanye wenza izigqibo kwamanye amabandla.
Ibandla ngalinye lilawulwa ngendawo ngamalungu amaninzi akhethwe phakathi kwamalungu. Lawa madoda ahlangabezana neziqinisekiso ezithile kule ofisi ewanikwa kwi-1 Timothy 3 noTito 1.
Kukho nawadikoni kwibandla ngalinye. Ezi zimele zihlangabezane neziqinisekiso ze-1 Timothy 3. Mna
Unqulo kwiicawa zikaKristu ziziko ezintlanu, zifana necawa yokuqala yokuqala. Sikholelwa ukuba umzekelo ubalulekile. UYesu wathi, "UThixo ungumoya, kwaye abo bamnqula bayakunqula ngomoya nangenyaniso" (John 4: 24). Kule nkcazo sifunda izinto ezintathu:
1) Unqulo lwethu kufuneka lujoliswe kwizinto ezilungileyo ... uThixo;
I-2) Kumele ifakwe ngomoya ofanelekileyo;
3) Kumele ukuba inyaniso.
Ukunqula uThixo ngokwe nyaniso kukumnqula ngokweLizwi lakhe, kuba iLizwi lakhe liyinyaniso (John 17: 17). Ngako oko, akufanele sichithe nayiphi na into efunyenwe kwiLizwi lakhe, kwaye asimele sifake nayiphi na into engayifumana kwiLizwi lakhe.
Kwimiba yenkolo sifanele sihambe ngokholo (2 Corinthians 5: 7). Ekubeni ukholo luvela ngokuva ilizwi likaThixo (amaRoma 10: 17), nantoni na engagunyazisiweyo yiBhayibhile ayinakwenziwa ngokholo ... kwaye nayiphi into engekho yokholo isono (amaRoma 14: 23).
Izinto ezintlanu zonqulo ezazigcinwe ngecawa yokuqala yecawa zazicula, zithandaza, zishumayela, zinika, zidla iSidlo seNkosi.
Ukuba uqhelana necawa zikaKristu mhlawumbi uyazi ukuba kwizinto ezimbini ezi zinto zihluke kwizinto ezininzi zonqulo. Ngoko vumela ukuba ndiqwalasele ezi zimbini, kwaye sichaze izizathu zethu zento esiyenzayo.
Acappella Sing Sing
Enye yezinto abantu abahlala beziqaphela ngokuphathelele iicawa zikaKristu kukuba sihlabelela ngaphandle kokusetyenziswa kwezixhobo zomculo - ingoma ye-cappella ngumculo kuphela osetyenziswayo kunqulo lwethu.
Kucacisiwe nje, nasi isizathu: sifuna ukunqula ngokwemiyalelo yeTestamente Elisha. ITestamente Entsha iphuma kumculo weengoma, ngoko, siyakholelwa ngokufanelekileyo kwaye iphephile ukuyiyeka, nayo. Ukuba sisebenzise isicatshulwa somatshini sifanele senze njalo ngaphandle kwegunya leTestamente eNtsha.
Kukho iindinyana ze-8 kwiTestamente Entsha malunga nomculo kunqulo. Apha:
"Baye bahlabelela ingoma, baphuma baya eNtabeni Yeminqumo" (Mateyu 26: 30).
"malunga nobusuku boPawulos noSilas babethandaza baze bacule iingoma kuThixo ..." (IZenzo 16: 25).
Ngenxa yoko ndiya kukudumisa phakathi kweentlanga, ndihlabele igama lakho "(Roma 15: 9).
"Ndiya kucula ngumoya kwaye ndiya kucula ngengqondo" (1 Corinthians 14: 15).
"Uzaliswe nguMoya, uxolelane ngeendumiso kunye neengoma kunye nezingoma zokomoya, ukucula nokubethela iNkosi ngentliziyo yakho yonke" (Efese 5: 18,19).
"Ilizwi likaKristu malihlale kuni ngokucebileyo, njengoko nifundisa nilumkisa ngazo zonke iingqiqo, njengoko nihlabelela iihubo kunye neengoma kunye neengoma zokomoya ngokubulela ezintliziyweni zenu kuThixo" (Kolose 3: 16).
"Ndiya kuvakalisa igama lakho kubazalwana bam, phakathi kwecawa ndiya kuhadi indumiso kuwe" (Hebhere 2: 12).
"Ngaba unomnye phakathi kwenu osikhathazayo? Makhe thandaze.
Isixhobo somculo esicacileyo asikho apha kule mihlathi.
Ngokomlando, ukubonakala kokuqala komculo oncedisayo kwinkonzo yecawa kwakungekho kude kube yintandathu yesibini AD, kwaye bekungekho ukuqhuba ngokuqhelekileyo kwada kwada emva kwekhulu lesibhozo.
Umculo we-Instrumental wawuchasene kakhulu ngabaholi benkolo ezifana noJohn Calvin, uJohn Wesley noCharles Spurgeon ngenxa yokungabikho kwiTestamente Entsha.
Ukugcinwa kweveki yeSidlo seNkosi
Enye indawo apho unokubona khona umahluko phakathi kwecawa zikaKristu namanye amaqela enkolo kwiSidlo seNkosi. Lesi sidlo sakusikhumbuzo savulwa nguYesu ngobusuku bokungcatsha kwakhe (uMathewu 26: 26-28). Iyabonwa ngamaKristu ekukhunjweni kokufa kweNkosi (i-1 Korne 11: 24,25). Izifanekiselo - isonka esingenagwele kunye neziqhamo zomdiliya - zifanekisela umzimba kunye negazi likaYesu (1 Corinthians 10: 16).
Iicawa zaKrestu zihluke kwiintlobo ezininzi ukuba siyazigcina iSidlo seNkosi ngosuku lokuqala lweveki. Kwakhona, izizathu zethu zezizathu ekuzimisele kwethu ukulandela imfundiso yeTestamente eNtsha. Ithi, ichaza isenzo secawa yokuqala, "Ngosuku lokuqala lweveki ... abafundi behlanganisene ukuphula isonka ..." (IZenzo 20: 7).
Abanye baye bakuphikisa ukuba umbhalo ungacacisi usuku lokuqala lweveki. Oku kuyinyaniso - njengoko umyalelo wokugcina iSabatha awucacanga yonke iSabatha. Umyalelo wawucacile, "khumbula usuku lweSabatha ukuligcina lingcwele" (Eksodus 20: 8). AmaYuda ayaqonda ukuba uthetha ngeSabatha. Kubonakala kuthi kuthi ngokucinga okufanayo "usuku lokuqala lweveki" lithetha usuku lokuqala lweveki.
Kwakhona, siyazi kwababhali-mlando abahloniphekileyo njengoNeander no-Eusebius ukuba amaKristu ekuqaleni athatha iSidlo seNkosi rhoqo ngeCawa.
Mhlawumbi uyazibuza, "Uba njani ilungu lecawa likaKristu?" Yiyiphi imiqathango yobulungu?
Iicawa zikaKristu azithethi ngobulungu ngokwemigaqo ethile ekufuneka ilandelwe ukuba yamkeleke kwamkelwa ebandleni. ITestamente eNtsha inika amanyathelo athile awathathwa ngabantu ngaloo mini ukuba abe ngamaKristu. Xa umntu eba ngumKristu ngokuzenzekelayo wayelungu lecawa.
Kuyafana neenkolo zikaKristu namhlanje. Akukho migaqo yeemigaqo okanye imikhosi ekufuneka ilandelwe ukuba ihanjiswe ebandleni. Xa umntu eba ngumKristu yena, ngelo xesha, uba ilungu lebandla. Awekho amanyathelo athile afunekayo ukuze afanelekele ubulungu becawa.
Ngosuku lokuqala lokuhlala kwecawa abo baphenduka baza babhaptizwa basindiswa (IZenzo 2: 38). Kwaye ukususela ngaloo mini, bonke abo basindisiwe bongezwa ebandleni (IZenzo 2: 47). Ngokwale ndinyana (IZenzo 2: 47) nguThixo othe wongeza. Ngoko ke, ekufuneni ukulandela le pateni, asivoteli abantu kwicawa okanye sibaphoqelele kwiinkalo ezifunwayo zezifundo. Asinelungelo lokufuna into engaphaya kokuthobela kwabo ukuthobela kuMsindisi.
Iimeko zokuxolelwa ezifundiswa kwiTestamente eNtsha zi:
1) Omnye kufuneka ave iindaba ezilungileyo, kuba "ukholo luvela ngokuva ilizwi likaThixo" (Roma 10: 17).
2) Omnye kufuneka akholelwe, kuba "ngaphandle kokholo akunakwenzeka ukukholisa uThixo" (Hebhere 11: 6).
3) Omnye kufuneka aguquke kwizono zangaphambili, kuba uThixo "uyala bonke abantu, ukuba baphenduke" (IZenzo 17: 30).
4) Omnye kufuneka avume uYesu njengeNkosi, kuba wathi, "Lowo undivuma phambi kwabantu, naye ndiya kuvuma phambi kobawo osemazulwini" (Mateyu 10: 32).
I-5) Omnye kufuneka abhaptizwe ngenxa yokuxolelwa kwezono, kuba uPetros wathi, "Phendukani, nibhaptizwe elowo egameni likaYesu Kristu ukuxolelwa kwezono zenu ..." (IZenzo 2: 38) .
Iicawa zikaKristu ziyaziwa ngokubeka uxinzelelo olunzulu kwisidingo sokubhaptizwa. Nangona kunjalo, asigxininisi ubhaptizo njengesiko "secawa," kodwa njengomyalelo kaKristu. ITestamente Entsha ifundisa ubhaptizo njengesenzo esibalulekileyo ekusindisweni (uMarko 16: 16; IZenzo 2: 38; IZenzo 22: 16).
Asingabonakalisi ubhaptizo lwamabhinqa kuba ubhaptizo lweTestamente eNtsha kuphela kubaboni abaphendukela eNkosini kwinkolelo kunye nokuphulukana. Isana asinasono sokuguquka, kwaye asikwazi ukufaneleka njengokholo.
Ubhaptizo kuphela esenzayo kwiicawa zikaKristu kukubhaptizwa. Igama lesiGrike apho igama elithi bhaptiza liza lithetha "ukudibanisa, ukucwina, ukudibanisa, ukudibanisa." Kwaye iZibhalo zihlala zibhekisela kubhaptizo njengengcwaba (IZenzo 8: 35-39; AmaRoma 6: 3,4; AbaseKolose 2: 12).
Ubhaptizo lubaluleke kakhulu kuba iTestamente Entsha ibeka ezi njongo zilandelayo:
1) Kukungena ebukumkanini (uJohn 3: 5).
2) Kuqhagamshelana negazi likaKristu (amaRoma 6: 3,4).
3) Kukungena kuKristu (Galati 3: 27).
4) Kukusindiswa (uMarko 16: 16; 1 Peter 3: 21).
5) Kungenxa yokuxolelwa kwezono (IZenzo 2: 38).
6) Kukuhlamba izono (IZenzo 22: 16).
7) Kukungena ecaweni (1 Corinthians 12: 13; Efese 1: 23).
Ekubeni uKrestu wafa ngenxa yezono zehlabathi lonke kwaye isimemo sokwabelana ngesisa sakhe esisindisayo sivulelekile kuwo wonke umntu (IZenzo 10: 34,35; ISityhilelo 22: 17), asikholelwa ukuba ubani ulungiselelwe ukusindiswa okanye ukugwetywa. Abanye baya kukhetha ukuza kuKristu ngokukholwa nokuthobela kwaye baya kugcinwa. Abanye baya kumgatya isikhalazo sakhe baze bagwetyelwe (uMarko 16: 16). Ezi aziyi kulahleka ngenxa yokuba ziphawulwe ngenxa yokugwetywa, kodwa kuba yile ndlela abayikhethayo.
Naphi na kulo mzuzwana, sinethemba lokuba uya kuthatha isigqibo sokwamkela usindiso olunikezwa nguKrestu-ukuba uya kuzinikela ngokholo olulandelayo kwaye ube ilungu lebandla lakhe.